Ukunqamuka kukagesi kuyakhathaza kulesi sikhathi - Bayede News
Isithombe: EPA/nguNic Botma
Ibhodi entsha kwezokundiza kuleli
Umhlaba jikele ubhekene nempi enkulu engaba nzima ukwedlula izimpi zomhlaba zombili ngenxa yesizathu sokuthi isitha okuliwa naso kasibonakali kodwa izigi zaso ziyezwela emnothweni wamazwe. Kubona bonke ubunzima obubhekene nezakhamuzi zamazwe, ohulumeni bamazwe bayazama ukwelekelela kulesi sikhathi esinzima.
ENingizimu Afrika ukunqanyulwa kukagesi kuyinto izakhamuzi ebeseziqala ukuyejwayela ngaphambi kokubhebhetheka kokhuvethe oluphoqe ukuba izwe livalwe. Amabhizinisi nezimo zempilo beziphazamiseka kakhulu uma sekunqanyulwa ugesi, kakhulukazi kumabhizinisi amancane amangi awo aphethwe ngaboHlanga kodwa okunye okubalulekile abantu abangakunaki uma kunqanyulwa ugesi ukuphazamiseka kwezindawo ezibheka impilo yezakhamuzi okuyimitholampilo nezibhedlela.
INingizimu Afrika mhla iqala ukuvakashelwa yilolu Khuvethe kwaba khona izinkulumo zokuthi ukunqanyulwa kukagesi ngeke kusenzeka kodwa lezo zinkulumo zifana nezingathi shu kuzakhamuzi njengamanje njengoba sekuphinde kwabuya ngesonto eledlule.
Lokhu kubanga izinkinga ezindaweni ezimbili okuyizikhungo zezempilo nasempilweni yansuku zonke kuzakhamuzi zezwe. Kodwa futhi zishiya imibuzo ngezithembiso ezenziwa uHulumeni ngaphambi kokufika kokhuvethe nangesikhathi selufikile.
Inkinga ezikhungweni zezempilo
Imitholampilo nezibhedlela zikaHulumeni izona eziphazamiseka kakhulu uma kunqanyulwa ugesi ezweni ngenxa yokuthi lokho kusho ukuma komsebenzi wokunakekela abantu ngenxa yokuthi ezinye zalezi zikhungo azinazo izinjini zokwelekelela uma kucime ugesi, okuchaze ukuthi uma kuphele ugesi iziguli eziningi zisala dengwane.
Njengoba ukhuvethe selugasele kuleli nezibalo zasebehlaselwe yilo ziyaqhubeka nokukhuphuka okuchaza ukuthi nenani labantu abasezibhedlela liyanyuka ikhakhulukazi lezi zikaHulumeni ngenxa yokuthi izibalo ziyakhombisa ukuthi iningi lezakhamuzi zaseNingizimu Afrika azikwazi ukusebenzisa imitholampilo kanye nezibhedlela ezizimele ngenxa yobubha. Lokhu kuchaza ukuthi lezi zakhamuzi ezinokhuvethe zihanjiwa kuzolezi zibhedlela zikaHulumeni uma sezihlaselwe ileli gciwane kodwa futhi inkinga iba ekutheni izibalo ziphezulu kugcine sekushoda nayo imibhede kanye namathangi e-oxygen.
Ukunqamuka kukagesi kuyisithikamezi esikhulu ngalesi sikhathi.
Omunye angathi ukuhlala ngaphandle kukagesi akulona icala elikhulu noma akuyona inkinga engajwayelekile ngenxa yokuthi khona lapha eNingizimu Afrika zikhona izakhamuzi eziphila ngaphandle kwawo kodwa iqiniso lithi yebo ziyaphila ngaphandle kwawo kodwa lesi sitha esiwukhuvethe asijwayelekile futhi ukufika kwaso kupjoqa ukushintsha kwendlela yempilo kwabaningi abaphila kahle kanye nalabo abahlaselwe ubuphofu.
Izakhamuzi eziningi zisebenzisa ugesi ukuzwa izindaba ezikhishwa uHulumeni mayelana nokhuvethe nsuku zonke ngakho-ke uma sekunqamuka ugesi kuchaza ukuthi izakhamuzi ezithile zizoncisheka ithuba lokuzwa okumenyezelwayo okungaba yizeluleko noma izifundo zokulwa nokhuvethe.
Njengoba uMengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa ebekhuluma nesizwe muva nje, baningi abakhale ngokuthi bamzwanga ngenxa yokuthi bebengenawo ugesi.
Njengoba isigaba semvalelwekhaya sesehlisiwe namabhizinisi amaningi esevuliwe, lokhu uHulumeni ukwenza ngoba uthi uzama ukulwa nokugqilazeka komnotho okwenzeke kakhulu ngesikhathi umnotho uvaliwe kodwa ukunqamuka kukagesi nakho kuyisithikamezi esikhulu ekukhuleni komnotho waleli zwe.
Kuyimanje amabhizinisi amaningi kakhulukazi amancane ayavalwa ngenxa yokugqilazeka komnotho kodwa ukuhamba kukagesi kuchaza ukuthi amanye awakwazi ukukhiqiza.
Isibonelo amabhizinisi asafufusa yiwo akhahlamezeka kakhulu okugcina kuwaphoqa ukuba avalwe amanye agcina esediliza izisebenzi, anciphisa namaholo. Kodwa konke lokhu kugcina sekuholele ekutheni iningi lingasebenzi okuba nomthelela ekwandeni noma ekukhuleni kwenani labantu abangasebenzi okuyimanje.
Imibiko iveza ukuthi inani noma isibalo sabantu abangasebenzi simi kumaphesenti angama-30 kodwa futhi kuvele eshaqisayo kakhulu ethi lesi sabelo singaqhubeka sikhuphuke sigcine sesifika kumaphesenti angama-50 ngenxa yokhuvethe.
Iqiniso lithi amabhizinisi angahlelekile iwona aseqashe iningi futhi iwona aletha umnotho kuleli zwe, ngakho ukuphazamiseka kwawo kusho lukhulu kumnotho wezwe.
Anathi Mtaka Jul 17, 2020